मागी विवाह ठीक कि प्रेम विवाह ? अविबाहित नायिका केकीको यस्तो छ सल्लाह » Etajakhabar
मागी विवाह ठीक कि प्रेम विवाह ? अविबाहित नायिका केकीको यस्तो छ सल्लाह
करिश्मा मानन्धर, अभिनेत्री
वास्तवमा भन्नुपर्दा मलाई प्रेमविवाह नै मनपर्छ । मेरो पनि पे्रमविवाह भएको हो । प्रेममा एक–अर्कालाई राम्रोसँग चिन्न पाइन्छ । एकले अर्काको कमीकमजोरी र राम्रो पक्षलाई पनि बुझ्ने मौका पाइन्छ । तर, मागकीविवाहमा भने कोही अपरिचित व्यक्तिसँग एक्कासि सम्बन्ध गाँस्नुपर्छ । साथै, मागीविवाहमा चाहिँ परिवार बढी जिम्मेवार हुन्छ ।
जसले गर्दा सम्बन्धमा खासै तिक्तता नआउन पनि सक्छ । पे्रमविवाह गर्ने धेरैको सम्बन्ध राम्रो भएको पाइँदैन । एकले अर्काको मर्यादा राखेकोजस्तो देखिँदैन । कतिपयको सम्बन्धविच्छेद पनि भएको छ । मागीविवाह र प्रेमविवाहका राम्रा र नराम्रा दुवै पक्ष छन् । तर, मलाईचाहिँ प्रेमविवाह नै मनपर्छ ।
रामकुमारी झाँक्री, नेतृ, नेकपा एमाले
दुवैखाले विवाहको आफ्नै महत्व छ । तर, आफ्नोबारेमा निर्णय लिन सक्ने सक्षम मानिसका लागि प्रेमविवाह नै ठीक हो । यसको मतलब मागीविवाह नराम्रो भन्न खोजेको होइन ।
विवाह भनेको मानिसको निजी मामिला हो । त्यसैले आफैँले निर्णय लिँदा राम्रो हुन्छ । पे्रमविवाह गर्दा आफूले कोसँग बिहे गर्दै छु, कस्तो छ भन्ने कुरा बुझ्न पाइन्छ । मेरो प्रेमविवाह नै हो, त्यसैले पनि प्रेमविवाह नै मन परेको होला ।
दुवै विवाह आफ्नो ठाउँमा ठीक छन् । मलाई भने प्रेमविवाह नै मनपर्छ । म पनि मिल्यो भने प्रेमविवाह गर्ने पक्षमा छु । तर, परिवारको सल्लाह लिन्छु । दुवैथरी विवाहका राम्रा पक्ष पनि छन्, नराम्रा पक्ष पनि छन् । मागीविवाहमा एक–दुई महिनाको चिनजानमै विवाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै, प्रेमविवाहमा पनि सबै कुरा थाहा भएर पनि कतिपय गौण कुरा थाहा नहुन सक्छ । त्यसले भविष्यमा सम्बन्धमा दरार आउन सक्ने सम्भावना पनि हुन सक्छ । तर, मलाई मागीभन्दा प्रेमविवाह नै मनपर्छ ।
जान्वी बस्नेत, अभिनेत्री
मलाई प्रेमविवाह मनपर्छ । किनभने मेरो परिवारमा जति पनि विवाह भएको छ सबै प्रेमविवाह नै भएको छ । जसमा मेरो हजुरबुबादेखि बुबासम्म सबैको प्रेमविवाह नै भएको हो । अहिलेको समयमा हेर्दा पनि मागीविवाहभन्दा प्रेमविवाह नै मनपर्छ ।
मागीविवाहमा एकले अर्कालाई नबुझीकनै निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । तर, प्रेमविवाहमा भने एकले अर्काको भावना बुझ्न पाइन्छ । मैले अहिलेसम्म कोसँग विवाह गर्छु भन्ने सोचेको छैन । तर, मेरो पनि प्रेमविवाह गर्ने सोच छ ।
दिया मास्के, अभिनेत्री
त्यो त परिस्थितिअनुसार हुन्छ । मलाई दुवै मनपर्छ । मैले प्रेमविवाह गरेँ । मागीविवाहमा आमाबुवाले भेटाइदिएर बिहे हुन सक्छ भने प्रेमविवाहमा आफैँले रोज्न सकिन्छ ।
कतिपय अवस्थामा आफूले रोजेको भोलि गएर राम्रो नहुन पनि सक्छ । त्यस्तै परिवारले खोजेको पनि राम्रो हुन्छ भन्न सकिँदैन । त्यसैले मलाई दुवै उस्तै लाग्छ ।
विवाह सबै मानिसका लागि आवश्यक कुरा हो । जसले गर्दा मागी होस् या प्रेमविवाह । विवाह हुनुभन्दा पहिला विवाह गरिने जोडीको चिनजान हुनुपर्छ । जसमा प्रेम नै हुनुपर्छ भन्नेचाहिँ छैन । जिन्दगीमा कुन वेला प्रेम हुन्छ, थाहा पनि हुँदैन ।
हामीले प्रेमविवाह भन्छौँ, तर त्यो आकर्षण हो । त्यसैले बिहे हुनुअघि एकले अर्कालाई गहिरो रूपमा चिन्नुपर्छ । जुन प्रेम र मागीविवाह पनि हुन सक्छ । अथवा दुवै नहुन पनि सक्छ ।
सुविन भट्टराई, लेखक
मलाई दुवै ठीक लाग्छ । मागीविवाहको आफ्नै मजा छ । त्यस्तै, प्रेमविवाह भनेको एक–अर्कालाई बुझेर गर्न पाइन्छ, त्यसको पनि मजा छुट्टै छ । विवाह आफैँमा राम्रो पक्ष हो । हिजोआज मागीविवाह पनि लभजस्तै हुन थालेको छ ।
पहिलाजस्तो एकैपटक जग्गेमा देखिने भन्ने छैन । तर, मैलेचाहिँ प्रेम गरेँ, तर मागीविवाहको प्रक्रियालाई पनि अंगालेँ । यसरी प्रेमपछि मागीलाई पनि अँगालेर विवाह गरिन्छ भने त्यसलाई सफल प्रेम भनिन्छ ।
जितु नेपाल, कलाकार
मलाई मागीविवाह नै मनपर्छ । किनभने मैले मागीविवाह गरेको हुँ । प्रेमविवाह पनि नराम्रो होइन । मागीविवाहपछिको एकले अर्कालाई चिन्नुको मजा नै बेग्लै हुन्छ ।
प्रेमविवाहमा चाहिँ पहिले नै सबै कुरा थाहा हुने हुनाले खासै रमाइलो हुँदैन । त्यसैले मलाई प्रेमविवाहभन्दा मागीविवाह नै मनपर्छ ।
मलाई विवाहमा यही किसिमको हुनुपर्छ भन्ने छैन । दुईजनाबीचमा मन मिलेको छ भने प्रेमविवाह नै ठीक हो । तर, मागीविवाहपछि पनि माया हुन जरुर छ । विवाह भनेको हाम्रो जिन्दगीको महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसैले यो समयमा हामीले धेरै कुरा सोचविचार गर्नुपर्छ ।
हामीले फेसबुकमा भेटेको भरमा अथवा परिवार वा आफन्तले भनेको भरमा कसैसँग सम्बन्ध जोडिहाल्न हुँदैन । त्यसैले एकले अर्कालाई बुझ्न सकिन्छ कि सकिँदैन अथवा सम्बन्धलाई दिगो बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराचाहिँ वेलैमा सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
आसिफ शाह, अभिनेता
मैले मागीविवाह नै गरेको हुँ । त्यसैले मलाई यही रमाइलो लाग्यो । यो हाम्रो एउटा संस्कृति पनि हो । यसको प्रक्रिया पनि निकै रमाइलो छ । मागीविवाहमा एक–अर्काका बारेमा सबै कुरा थाहा पाउन सकिन्छ । तर, प्रेमविवाहमा केटा र केटीले मात्र एक–अर्कालाई बुझेका हुन्छन् ।
मागीविवाहमा चाहिँ दुवै परिवारको बारेमा स्पष्टसँग बुझ्न पाइन्छ । जसले गर्दा भोलिका दिन सहज हुन्छ । मलाई मागीविवाह नै मनपर्छ ।
मलाई मागीविवाह मनपर्छ । किनभने, पछिल्लो समय प्रेमविवाह गर्ने धेरै जोडी छुट्टिएका पाएँ । फेरि, मागीविवाह पनि पूर्ण रूपमा सफल हुन्छ भन्ने छैन । तैपनि मागीविवाहमा केटा वा केटीले एक–अर्कालाई र परिवारलाई चिन्दाचिन्दै वर्ष दिन गएको थाहा हुँदैन । त्यसपछि पारिवारिक जीवन सुरु हुन्छ । अनि लाइफको गोरेटो पनि खनिन्छ ।
मागीविवाह गर्दा आफ्नो परिवारले केटाकेटी वा उसको परिवारलाई हेर्न पाउँछ । त्यसमा सबैजनाको निर्णय हुन्छ । प्रेमविवाहमा एकजनाले रोज्ने हुन्छ भने मागीविवाहमा चाहिँ परिवारका सदस्यले निर्णय गर्ने हुनाले यो भरपर्दो हुन्छ जस्तो लाग्छ । त्यसैले म पनि मागीविवाह नै गर्छु । नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
कालिप्रसाद बास्कोटा, संगीतकार
दुवै बिहेका आ–आफ्ना विशेषता छन् । मलाई विवाह मनपर्छ । तर, मागी कि प्रेम भन्नेमा चाहिँ व्यक्तिमा भर पर्छ । मेरोचाहिँ मागीविवाह भएको हो । मागी र प्रेम भनेको एउटा विवाहको माध्यम मात्र हो । आखिर विवाहपछि हुने त सबै त्यही नै हो । त्यसैले मागी र प्रेमभन्दा पनि विवाहपछि सम्बन्ध कस्तो बनाउने भन्ने दुवैजनाको हातमा हुन्छ ।
मागीविवाहमा परिवार प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ । तर, कतिपय प्रेमविवाहमा भने परिवारको संलग्नता भएको पाइँदैन । त्यसैले प्रेमविवाह गर्दा पनि परिवारका सदस्यको सरसल्लाह लिएर गर्दा भविष्यमा राम्रो हुन्छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, मंसिर १७, २०७४ समय: ८:१५:१२